Diyo post :: ‘दुई/तीन मिनेटमा राजा विरेन्द्रको परिवार सिद्धिसकेको थियो’ ‘दुई/तीन मिनेटमा राजा विरेन्द्रको परिवार सिद्धिसकेको थियो’ - Diyo post
विवेक कुमार साह,विरेन्द्रका सैनिक सचिव
सत्य छानबिन भए ज्ञानेन्द्र चोखिने मौका पाउँथे ।
दीपेन्द्रको कोठामा ५ /७ वटा राईफलहरु हुन्थ्यो । उहाँको मोटरमा पनि हतियार हुन्थ्यो ।
त्यो हतियारले एक मिनेटमा एक हजार राउन्ड फायर गर्छ । यस्तो सोफेस्टीकेटेड हतियारहरु छन् । घटना त २/४ मिनेटमै सकिएको छ ।
‘म राजा भएन भने कोही पनि हुन्न’ दिपेन्द्र भन्नुहुन्थ्यो । विरेन्द्रको पोस्टमार्टम गर्न गिरिजा पनि तयार हुनुभएन ।
तत्काल एडिसीले किन रियक्ट गर्न सकेन ?
काठमाडौं । तत्कालिन राजा विरेन्द्र साह नेपाली जनमानसमा लोकप्रिय थिए । तर उनै विरेन्द्र सम्पूर्ण परिवारको २०५८ साल जेठ १९ गते आजकै दिन निर्ममता पूर्वक हत्या भयो । पटक–पटक सरकार बनेपनि उक्त हत्याकाण्डबारे नेपाली जनताले चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन सकेका छैनन् । २ तत्कालिन राजदरबार सुरक्षाको जिम्मा लिएका प्रमुख सैनिक सचिव विवेक कुमार साह दरबार हत्याकाण्डलाई ‘राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय खेलको रुपमा बुझाउँछन् । २५ वर्ष राजदरबार सुरक्षामा रहेका उनै साहसँग दरबार हत्याकाण्डबारे दियोपोस्टका लागि सुदीप विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
दरबार हत्याकाण्डलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
त्यो घटना कल्पना नै गर्न नसकिने घटना थियो । साथसाथै नेपालको इतिहासमा एउटा युगान्तकारी घटना पनि थियो । यो घटनाले मुलुक गणतन्त्रमा जाने आधार तयार गर्‍यो । त्यसले नेपालको दुई सय पचास वर्षको ईतिहासलाई दखल पुर्‍यायो ।
त्यो दिनबारे कुनै तस्विर अहिले याद छ ?
त्यो सोचभन्दा बाहिरको दृष्य हो । दिमाग खाली हुन्छ । कुनैपनि मान्छेको सोच भन्दा बाहिरको कुरा हो । ‘त्यस्तो पनि हुने रहेछ जस्तो लाग्छ ।
दरबार हत्याकाण्डको करिब १६ वर्ष लाग्दा पनि घटनाको कारण भने रहस्यमै छ । तपाईंले आफ्नो पुस्तक, ‘मैले देखेको दरबारमा’ घटनामा तत्कालिन युवराज दिपेन्द्र साहको चरित्रलाई दोष दिनुभएको छ । उहाँलाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिले उक्साएको समेत संकेत गर्नुभएको छ । को हुन् ती शक्ति ?
एउटा सिक्काको दुईटा पाटो जस्तै कुनै पनि घटनाको दुई पाटो हुन्छ । जनसमक्ष आएको उक्त घटनाबारे उच्च स्तरिय आयोगले पनि छानबीन गरिसकेको छ । तर, त्यो घटना किन भयो त्यसको लामो सिक्वेन्स के हो ? त्यो कुरा हेरफेर गर्नुपर्छ । त्यो हामीसँग छैन । युएनको माध्यमबाट होस् या अन्यबाट अनुसन्धान भयो दरबार वा ज्ञानेन्द्रले चोखिने मौका पाउनुहुन्छ । जसलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ । त्यसबाट दरबारले मुक्ती पाउँथ्यो । यो कुरा मैले ज्ञानेन्द्रलाई पनि पटक–पटक जाहेर गर्ने गरेको छु ।
विवेक कुमार साह
किन राजा तयार भएनन् ?
तत्कालीन अवस्थामा भएको उच्च स्तरिय आयोगले छानबिन गरेको कारण पनि हुन सक्छ । आयोगले गरे पुगि हाल्छ नी भन्ने भयो की ?
तर त्यो आयोगले गरेको छानबिनमाथि नेपाली जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । त्यो आशंका अहिलेपनि कायम छ । छानबिनमा कमजोरी थिएन र ?
उहाँहरुलाई छानविन गर्ने बेलामा हामीले सहयोग गरेको हो । तर आयोगसँग प्राविधिक विज्ञहरु थिएनन् ।
राज्य नै लाग्दा पनि किन प्राविधिक विज्ञ पनि ल्याउन सकेन ?
सरकारले चाह्यो भने जहाँबाट पनि ल्याउन सक्थ्यो । त्यसैले त गिरिजाले सधै भन्ने गर्नुहन्थ्यो ‘ग्रयान्ड डिजाईन’ । यो भनेर नै उहाँ जानुभयो । सायद उहाँले केही थाहा पाउनुभएको थियो की ?
अहिले आएर मेरो किताव पनि आयो । केही कुराहरु थाहा पाए । दिपेन्द्रको चरित्र वा अन्य विषयमा पनि थाहा पाए । त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम राजसंस्था नै ढल्यो । नयाँ मान्छेहरु प्रमुख भूमिकामा आए । त्यसले कतै न केही थियो भन्ने देखाउँछ ।
भारतका मन्त्रीहरुले नै नेपालको प्रधानसेनापति प्रकरणमा हाम्रो समर्थन थियो भनेका कुराहरु पनि आइरहेको छ । अथवा १२ बुँदे सहमति पनि भारतले नै गराएको हो भनेर नेपाली नेताहरु नै भन्नुहुन्छ । यो घटनाले कुनै न कुनै संकेत गर्छ । कालान्तरमा गएर मदन भण्डारीको दुर्घटनाकाण्ड पनि यहि सिरीजमै जोडिएको छ ।
यो घटनाको कारण कुन शक्ति हुनसक्छ ?
दरबार छोडेपछि मैले अन्तरवार्तामा भनेको थिएँ, ‘घटनाक्रम समयसँगै आउला । अब कतिपय कुराहरु रिभेल होलान् ।’ केही न केही त अहिले आईरहेको छ । जस्तो राजसंस्था नै गयो । यो अस्थिरता कायम भएको ८/१० वर्ष पनि भैसक्यो । भारतका मन्त्रीहरुले नै नेपालको प्रधानसेनापति प्रकरणमा हाम्रो समर्थन थियो भनेका कुराहरु पनि आइरहेको छ । अथवा १२ बुँदे सहमति पनि भारतले नै गराएको हो भनेर नेपाली नेताहरु नै भन्नुहुन्छ । यो घटनाले कुनै न कुनै संकेत गर्छ । कालान्तरमा गएर मदन भण्डारीको दुर्घटनाकाण्ड पनि यहि सिरीजमै जोडिएको छ ।
तपार्इंले संकेत गर्नुभएको भारत हो नी होईन ?
नेपालमा जसको ‘ईन्ट्रेस्ट’ छ । नेपाललाई केही शक्ति राष्ट्रहरु आफ्नो योजनामा पार्न चाहान्छन् ।
त्यतिबेला तपाईं सैनिक सचिव हुनुहुन्थ्यो, दरबार भित्र आउने सुचनाको मुख्य केन्द्र पनि तपार्इं नै हुनुहुन्थ्यो किन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेलको कुनै संकेत पाउनुभएन ?
त्यतिबेला आन्तरिक द्वन्द थियो । धेरै स्रोतहरु, नै द्वन्द्वको आउँथ्यो । तर मदन भण्डारीको दुर्घटनाकाण्डको संकेत होकी जस्तो लाग्छ ।
मदन भण्डारीको दुर्घटनापछि दरबार हत्याकाण्ड हुनु नै तथ्य हो । पटक–पटक आयोग बन्यो तर निचोड आएन । दरबार हत्याकाण्डको दोष राजा ज्ञानेन्द्रलाई आयो तर आयोगको छाबिनले अर्कै देखायो । त्यस्तै मदन भण्डारी हत्याकाण्डको छानबीन गर्न एमालेका नेताहरु किन चाहाँदैनन् ? जे भएको थियो त्यो राष्ट्रको विरुद्ध भएको थियो । यसमा विज्ञहरु ल्याएर छानबिन किन नगर्ने ? त्यस्तो लोकप्रीय व्यक्तिहरुलाई सिनबाट हटाएर को आए ? कसलाई फाईदा भयो देखिहाल्नुभएको छ ।
यो घटनासंग जोडिने केहि तथ्य छन् ?
घटना भएको दिन तपाईंलाई कुनै सुचना नुहुनु तपाईंले एकैपटक राजा विरेन्द्रलाई अस्पतालमा देख्नु, यो त अनौठो भएन र ? आफै सैनिक सचिव आफैलाई केही थाहा नहुने किन ?
मेरो ड्युटी १०–५ थियोे । दरबारको आफ्नै रितिरिवाज छ । यो नबुझ्नेलाई यो लाग्नु स्वभाविक हो । त्यत्तिका हतियार कसरी आए जस्तो लाग्छ । तर, राजा महेन्द्रकै पालादेखि उहाँले आफ्नो कोठामा हतियार राख्नु हुन्थ्यो । राजकुमारले हतियार प्रयोग गर्ने चलन बढ्यो । आर्मी ट्रेनिङ गर्ने, आफैले नयाँ हतियार प्रयोग गरियो । त्यतिबेला अमेरिकन राईफल एचके ३६ को परिक्षण भईरहेको थियो । महिनाको एकचोटी त दरबारमा फायरिङ हुन्थ्यो । हतियार टेस्ट गर्न युवराज पनि आउँनुहुन्थ्यो । युवराजको कोठामा ५ /७ वटा राईफलहरु हुन्थ्यो । उहाँको मोटरमा पनि हतियार हुन्थ्यो । हामीले कमेन्ट गर्न सक्ने हालत थिएन । महाराजधिराजले आफैले नै ‘यसो गर उसो गर भनेर उहाँलाई ‘इनकरेज’ गर्नुहुन्थ्यो । यो चलन अरुलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर मलाई तपाईंको प्रश्नमा अचम्म लाग्दैन ।
दिपेन्द्रलाई मात्रै दोष दिएर कसरी उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ ?
दरबार भित्रै हतियार राख्ने परम्परा थियो । त्यसमा हामीले प्रश्न गर्ने अधिकार थिएन । मुख्य मान्छे महाराजधिराजले न ‘अथोरीटी’ दिएपछि हामी तलको मान्छेले ‘यो हतियार बढी भयो यसलाई यतै कोतमा राख्ने होकी भन्ने एउटा कुरा हो ।
छानबीनको क्रममा युवराज दीपेन्द्रले चलाएको हतियार सार्वजनिक गर्दै तत्कालिन सभामुख तारानाथ रानाभाट
हतियार प्रयोग नगर्न तपाईंले सुझाव दिनुभएन ?
मैले मात्रै होईन म भन्दा अगाडीकाले पनि दिएका थिए । त्यस्तो अरु देशमा पनि गरिन्छ । विषेश गरेर राजसंस्थासँग सम्बन्धितहरुले सुरक्षाको लागि राखेका हुन्छन् । आफ्नो सुरक्षाको लागि जसले पनि राख्न पाउँछ । अमेरिकामा ३ सय मिलीयन हतियारहरु आम नागरिककै हातमा छ, त्यहाँको सिस्टम नै त्यस्तै छ । हामीलाई यहाँ १२ बोर र टुटु राख्नलाई दुनियाँ गर्नुपर्छ । हतियार किन्ने पसल पनि छैन । त्यो हाम्रो सिस्टम हो । यहाँ युवराजले आफ्नो घरमा राख्नु कुनै ठूलो कुरा भएन ।
त्यो अवस्था कसरी आयो भन्ने कुरा छ । त्यो हतियारले एक मिनेटमा एक हजार राउन्ड फायर गर्छ । यस्तो सोफेस्टीकेटेड हतियारहरु छन् । घटना त २/४ मिनेटमै सकिएको छ ।
राजाले आफ्नै सुरक्षामा राखेको हतियार आफ्नै परिवार विरुद्ध कसरी पड्कियो भन्ने जनतामा आशंका छ । तपाईं सैनिक सचिव भएपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?
त्यो हतियार कति क्षमताको थियो ?
त्यसले सय मिटरसम्म हान्न सक्थ्यो । प्रतिमिनेट एक हजार राउन्ड गोली जान्थ्यो । एमपी ५ भन्ने जर्मन सेक्युरीटी सर्भिस र संसारका धेरै मुलुकहरुले त्यही प्रयोग गर्ने गर्छन् । उजी राईफल पनि थियो ।
सेक्युरिटीको लागि किन कोही भएनन् ?
उहाँको बगलाबाहिर ढोकासम्म हामी हुन्थ्यौं । तर, भित्र अरु कोही हुन्थेन । त्यहाँको परिवार र भित्र काम गर्ने नानीहरु हुन्थे । साही रनर हुन्थे, भित्र काम गर्ने युवाहरु हुन्थे । त्यो बाहेक सेक्युरिटीको मान्छे कोही पनि भएन ।
त्यहि त अचम्मको कुरा छ, एकै परिवारै सखाप हुने घटना हुँदा सेक्युरिटी कोही हुँदैन किन ?
मेरो विचारमा तपाईंले राजसंस्थाको धेरै इतिहास पढ्नुभयो भने यो नौलो घटना होईन । यो एकै ठाउँमा यति ठूलो घटना हुनु विडम्बना हो । उदाहरणका लागि केही समय अगाडी साउदीका राजा किङ फैजललाई लाईन लागेर बधाई दिने क्रममा आफ्नै भतिजाले छुरी हानेर मा–यो । इतिहास पढ्ने हो भने सत्ता छिन्नको लागि मार्नै पर्ने थियो नी ।
नेपालको राजपरिवार त्यस्तो अवस्थासम्म पुगेको थियो र ?
यो अवस्थासम्म पुग्ला भन्ने थिएन । तर परिवारमा केही असन्तुष्टिहरु थिए । असन्तुष्टिहरु हुन्छन् । मैले किताबमा पनि लेखेको छु ।
मैले उहाँको चरित्र त बच्चैदेखि नियालीरहेको छु । ‘म राजा भएन भने कोही पनि हुन्न’ दिपेन्द्र भन्नुहुन्थ्यो । बैबाहिक कुराले गर्दा जुन असन्तुष्टि थियो, त्यसले यस्तो स्वरुप लिनसक्छ भन्ने कसैले कल्पना गरेको थिएन ।
‘अब त्यस्तै हो भने त महेन्द्रले गर्‍या जस्तो वडा अध्यक्षलाई ल्याएर, नागार्जुन गएर कोर्ट म्यारिज गर्दिन्छु, ’ मलाई नै यो कुरा भन्नुभएको थियो । त्यहाँसम्म पुगेको अवस्था हो ।
तपाईंले ब्रम्हैदेखि भन्नुपर्दा यो कसको खेल थियो ?
मैले ठम्याउन सकेको छैन । खोजविन गर्नुपर्ने यही पाटो हो । तर मलाई लाग्छ मदनभण्डारीको दुर्घटनाकाण्ड दरबार हत्याकाण्डसँग कतै न कतै जोडिन्छ ।
तत्कालीन एडिसिले छिटो रियाक्ट गर्न सकेन । त्यसमाँ कमजोरी भएको हो । एडिसी र मैरै । ‘किन उनीहरुले रियाक्ट गर्न सकेनन्, उनीहरुले यस विषयमा ट्रेनिङ लिएका हुन्छन् । जुन समयसिमामा त्यो घटना भयो, त्यसले फेरी अघिल्लो भनाईलाई न्याय गर्दैन । त्यो यति छोटो समयमा भयो उनीहरुले आफ्नो क्षमता देखाउनै सकेनन् ।
विरेन्द्रको सुरक्षा प्रमुख आफै हुँदाहुँदै यति ठूलो हत्या हुँदा तपाईंमा आत्मग्लानी महशुस हुँदैन ?
त्यो बेलामा दरबारको सुरक्षा, संरचनामा कुनै कमी कमजोरी भए जस्तो मलाई लाग्दैन । आफनै परम्परा अनुसार चलिराथ्यो । तत्कालीन एडिसिले छिटो रियाक्ट गर्न सकेन । त्यसमाँ कमजोरी भएको हो । एडिसी र मैरै । ‘किन उनीहरुले रियाक्ट गर्न सकेनन्, उनीहरुले यस विषयमा ट्रेनिङ लिएका हुन्छन् । जुन समयसिमामा त्यो घटना भयो, त्यसले फेरी अघिल्लो भनाईलाई न्याय गर्दैन । त्यो यति छोटो समयमा भयो उनीहरुले आफ्नो क्षमता देखाउनै सकेनन् ।
कति समयसिमामा भएको थियो ?
२/३ मिनेटमा त सबै सिद्धिसकेको थियो । १०/१५ मिनेटमा टोटल्ली सकिएको थियो ।
एडिसी कतिको दुरीमा थिए ?
कोठा बेग्लै थियो । एउटा करिडोरबाट पर एडिसिको बेग्लै अफिस थियो । त्यतिबेला एउटा कोही बाहिर हुनुपथ्र्यो ।
नेपाली सेनाको दरबार सुरक्षा गर्ने अंगसँग नजिकैको कोठासम्म हेर्नसक्ने कुनै प्रविधि नहुनु लाजमर्दो कुरा भएन र ?
सिसिटिभी हुनुपथ्र्यो । युवराजको कोठाबाट बाहिर एडिसीको अफिसम्म हेर्न मिल्थ्यो तर भित्र थिएन ।
हत्यापछि राजा विरेन्द्रको शवको पोस्टमार्टम किन गरिएन ?
त्यतिबेला डाक्टरहरु पनि तयार भएका थिए । राजाको शरिर किन चिर्ने भन्ने कुरा आएपछि सबैले स्विकार गर्नुभयो । मुमाबडामहारानीको आसय पनि त्यस्तै देखियो । किन भने पोस्टमार्टम पत्ता लगाउने भनेको कारण पत्ता लगाउने हो । कारण त गोली थियो । त्यसकारण आवश्यक देखिएन ।
त्यो कमजोरी थियो कि थिएन ?
त्यो भन्न सकिन्न । १५ वर्ष अगाडिको कुरा हो । तर अहिलेसम्म घटनाको छानबिन नहुनुमा त्यतिबेला गरेको भए हुनेरहेछ ।
पोस्टमार्टम नगर्न गिरीजाले पनि समर्थन जनाउनुभएन होईन ?
हो । उहाँहरुले पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ भनेको भए त जसरी पनि हुन्थ्यो ।
दरबार हत्याकाण्डको छानबिनको लागि ज्ञानेन्द्र साहको भूमिका कस्तो रह्यो ?
पहिलो पटकको छानबिन आयोगले नै काम गर्‍यो । हामीले पनि दरबारबाट आन्तरिक छानबीन समिति बनायौं । मेरै अफिसले बनाएको हो । आन्तरिक रुपमा बनाएको प्राविधिक समिति थियो । शान्तकुमार मल्ल त्यो आयोगको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । आफैले आफूलाई अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भएकाले म त्यो समितिमा बसिन ।
त्यो समितिको निष्कर्श के थियो ?
यति छोटो समयमा भएको उक्त घटनामा एडिसिले किन ‘रिएक्ट’ गर्न सकेन भन्ने थियो । दरबारमा हतियार राख्नु हुँदैन अब देखि नराख्ने कुरा भयो ।